dopamine စနစ်၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမှုနှင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ (2015) - Your Brain On Porn
dopamine system ကိုတုံ့ပြန်မှုနှင့်၎င်း၏ adapter နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုမှရောဂါဗေဒတုံ့ပြန်မှု (2015) ၏စည်းမျဉ်း
ပေါ်လင်း Belujon, အန်သိုနီအေ ကြေးဇူး
Doi: 10.1098 / rspb.2014.2516 18 မတ်လ 2015 Published
သမိုင်းကြောင်းအက, norepinephrine စနစ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများ၏လေ့လာမှုမှာအာရုံစိုက်မှုများ၏အများစုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်သော်လည်း, dopamine စနစ်ကလည်းတသမတ်တည်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ဒါဟာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ pathogenesis အတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍမြဲမြံစွာတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါများအတွက်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖျန်ဖြေသော neurobiological ယန္တရားများကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါ dopamine စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ dopamine (DA) စနစ်စိတ်ရောဂါမမှန်၏နံပါတ်များအတွက်အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသောသော်လည်း, ထိုရောဂါဗေဒအဆိုပါ DA စနစ်၏ dysregulation inducing သော afferent အဆောက်အဦများအတွက်အစပြုဖွယ်ရှိသည်, ထိုတွေးဆသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစိတ်ဖိစီးမှု / DA circuitry ၏ afferent မော်ဂျူ၏လက်ရှိအသိပညာစူးစမ်း, နှင့်၎င်း DA system ပေါ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်ရန်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုအာရုံစိုက်မကြာသေးမီဒေတာတွေ့ရမယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုယေဘုယျအနေနဲ့သက်ရှိများ၏ homeostasis ရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖန်တီးစေခြင်းငှါမဆိုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ ) ။ ထို့ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအများအပြားဇီဝကမ္မဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူ။ အမှန်မှာထို '' စစ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်-ပျံသန်း '' တုံ့ပြန်မှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသော hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး၏ activation [အန္တရာယ်များတဲ့အခွအေနေကနေခြိမ်းခြောက်မှုရန်ကိုအဓိက neuroendocrine နှင့်ဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်2] ။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးဦးနှောက်နှင့်အရံစနစ်များကွန်ယက်၏, က adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) secretes သော anterior pituitary မှ corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့်စီမံကိန်းများကိုဖြန့်ချိသော hypothalamus, ပါဝင်သည်။ HPA ဝင်ရိုး activation (ထို adrenal gland အားဖြင့် glucocorticoids ၏ဆိုလိုသည်မှာလွှတ်ပေးရန်) ၏အဆုံးထုတ်ကုန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကိုတစ်ခုသက်ရှိသတိပေးရန်နှင့် homeostasis ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်  ။ ဒါကြောင့်သက်ရှိထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ပါတယ်; ထိုသို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်ရောဂါဗေဒအခြေအနေများ, ၏နံပါတ် precipitate နိုငျသောကွောငျ့သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လုံလောက်မှုမရှိ adrenocortical လှုပ်ရှားမှု [ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်4] နှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါ  သို့မဟုတ် psychotic  မမှန်။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး afferents တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား set ကိုအသုံးပြုပုံနဲ့အထူးသဖြင့် limbic system ကို-ဆက်စပ်ထိုကဲ့သို့သော prefrontal cortex (PFC) အဖြစ်ဒေသများသည်နျူကလိယ accumbens (NAc), အ amygdala နှင့် hippocampus ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်  ။ စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုမှနောက်ထပ်အဓိက neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု locus coeruleus (LC) အာရုံခံ၏ activation အားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ noradrenaline တစ်လျင်မြန်စွာဖြန့်ချိအတွက်ရလဒ်များသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ activation ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးနှင့် LC-norepinephrine (NE) စနစ်စနစ်တကျစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောနှစ်ခုအဓိကဦးနှောက်ကွန်ရက်များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်က dopamine (DA) စနစ်များစွာကိုစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်ရောဂါဗေဒတုံ့ပြန်မှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့တုံ့ပြန်မှု၌၎င်း, အထူးသဖြင့်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကြောင့်ပိုပိုပြီးထင်ရှားဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ DA သည့်စနစ်ဖြင့်သဘာဝနှင့်အတုဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အမှန်မှာက [mesolimbic DA ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic ရှုထောင့် mediates ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ8] ဒါကြောင့်အမူအကျင့်အားဖြည့်များအတွက်သင်ယူမှု signal ကိုအဖြစ်ပြုမူကြောင်း  ။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများကိုလည်းရှိမရှိဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်အကြိုး, DA သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအခြေခံလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုခံရဖွယ်ရှိကြောင်းအကြံပြုသော DA လွှတ်ပေးရန်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ [10,11] ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများ (MDDs) အပါအ ၀ င်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများစွာတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိသည်။ အများအပြားလေ့လာမှုများ ဦး နှောက်ထဲမှာ DA စနစ်၏အခြေခံနှင့်ရောဂါဗေဒ function ကိုသတ်မှတ်ကြပါပြီပေမယ့်, DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု၏ရှုပ်ထွေး afferent မော်ဂျူဖော်ထုတ်အများအပြားရောဂါများကုသရန်လုံလောက်သောနှင့်ထိရောက်သောကုထုံးချဉ်းကပ်မှုရှာတွေ့မှအလွန်အရေးပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ရောဂါများစွာသည် DA စနစ်၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သော afferent အဆောက်အ ဦ များမှအစပြုနိုင်သည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်စိတ်ဖိစီးမှု / DA တိုက်နယ်၏ afferent မော်ဂျူလ်၏လက်ရှိဗဟုသုတကိုအနှစ်ချုပ်ထားပြီး DA စနစ်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်သက်ဆိုင်မှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအာရုံစိုက်သည့်မကြာသေးမီကအချက်အလက်များကိုတင်ပြသည်။
2 ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် norepinephrine စနစ်က
အဆိုပါ catecholaminergic system ကိုထပ်တလဲလဲတုံ့ပြန်မှုအလေးပေးဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်, ထို LC-NE စနစ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပါအဝင်အပြုအမူပြည်နယ်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍနှင့်စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ရန်အတွက် arousal ၏ပြည်နယ်တိုးမြှင့်ဖို့ဝတ်ပြုမည်အကြောင်း (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ ) ။ အဆိုပါ LC-NE system ကို [ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအပါအဝင်ဖိအား၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးကြောင့် activated ဖြစ်ပါတယ်12] footshocks  နှင့်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု  ။ အထူးသဖြင့်, စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ပြီးနောက်, LC အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာ [လည်းမရှိ15] အဖြစ် LC အာရုံခံစီမံကိန်းကိုသောဒေသများအတွက် NE လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တစ်ခုတိုးလာ  ။ အဆိုပါ LC ၏တွေ့ရှိရပါသည် [နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် HPA ဝင်ရိုး hyperactivity တားဆီးပေမယ့်စူးရှထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုမှ neuroendocrine ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု attenuate ရန်ပျက်ကွက်17], အ LC-NE စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုမှဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းအကြံပြု။ ထိုမှတပါး, CRF နှင့်အတူ LC အာရုံခံ၏ activation [စူးရှသောကဖိစီးမှုကဲ့သို့တူညီသောအပြုအမူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်18] ။ သို့သော် LC [အလှည့်အတွက် HPA ဝင်ရိုးမှပရိုဂျက်ပေးပို့ထားတဲ့, အ HPA ဝင်ရိုးမှဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သော amygdala နှင့် hippocampus အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ဖိစီးမှု-related အဆောက်အဦများထံသို့တိုက်ရိုက်ပရောဂျက်ပါဘူး19] ။ အဆိုပါ hippocampus (vSub) ၏ ventral subiculum, အ hippocampus ၏အဓိကထွက်ရှိ [အတွက် LC-NE system ထဲကနေသိပ်သည်း innervation အားလက်ခံတွေ့ဆုံ20] နှင့်ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်  ။ ယင်းဖိအားရာအရပ်ကိုကြာထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်ထိရောက်စွာတစ်ခုသက်ရှိများ၏သပ္ပါယ်တုံ့ပြန်မှုလမ်းပြမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, vSub [ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်သော့ချက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်22] ။ ဒါက [ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, ရေကူးခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းစိတ်ဖိစီးမှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဖိအားထိတွေ့ကြွက်အတွက် hippocampus အတွက် Fos ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ်ခုတိုးနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်23] ။ လေ့လာရေး [အတွက် LC-NE စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုလိုက်လျောညီထွေအထောက်အကူပြုနိုင်သည့် vSub အာရုံခံတစ်ခုတားစီးသို့မဟုတ် activation, inducing, vSub အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအစွမ်းထက် modulator တွေကိုကြောင်းကိုပြသကြ24] ။ ထိုမှတပါး, footshocks [vSub အာရုံခံအတွက် LC ဆွဖို့တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းသော vSub အတွက်အာရုံခံအများစု, ကိုသက်ဝင်25] ။ အဆိုပါ vSub အဆိုပါ vSub [limbic စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှုတခုတခုအပေါ်မှာအထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းအကြံပြု, အလှည့်အတွက် hypothalamic paraventricular အာရုံခံမှစီမံချက်များရှိသည်ထိုကဲ့သို့သော PFC နှင့် amygdala အဖြစ်အများအပြား limbic forebrain အဆောက်အဦများ, innervates26] homeostasis ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, အရာ။ လည်းခိုင်ခံ့ LC projection [လက်ခံရရှိထားတဲ့ amygdala နှင့်အထူးသဖြင့်အတွင်း basolateral နျူကလိယ (BLA),19] အလားတူ [စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ်27] နှင့်အပြန်အလှန် activation vSub နှင့် BLA သွင်းအားစုများအကြားတည်ရှိ  ။ စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့စဉ်အတွင်း BLA အတွက် NE တိုး၏အဆင့်ဆင့်  နှင့် BLA လည်း LC အာရုံခံကိုသက်ဝင်ပြခဲ့ကြပြီစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ neurons  ။ ထိန်းသိမ်းထားသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲဖိအား [ထိုကဲ့သို့သော dendritic အဆိုပါ hippocampus အတွက်ကျုံ့လျက်, BLA အတွက် dendrites နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်တိုးအဖြစ် hippocampus နှင့် BLA အပေါ် morphological သက်ရောက်မှု, ထုတ်လုပ်ရန်30] ။ တစ်ဦးကခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှု Synaptic plasticity နှင့်ကျောရိုးထဲမှာ morphological အပြောင်းအလဲများအကြားတည်ရှိ  ။ ဥပမာအားစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှု [သည့် BLA အတွက် adrenergic-မှီခိုရေရှည်အလားအလာတစ်ခုတိုး induces32] အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှု, စိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဖြစ်, ဒီ circuitry အတွက် dysregulation ပါဝင်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, mPFC လည်းစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုဖို့တုံ့ပြန်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရွေးချယ် [စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးဖိအားများက activated ဖြစ်ပါတယ်33] နှင့် LC-NE system ထဲကနေမော်ဂျူမှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း neuroendocrine function ကို modulate မှလူသိများသည်  ။ ထို့အပြင် BLA-PFC လမ်းကြောင်းအတွက်ရေရှည်အလားအလာ [ဟုမေးခှနျးထုစိတ်ဖိစီးမှုမှကြိုတင်ထိတွေ့မှုအားဖြင့် inhibited ဖြစ်ပါတယ်35] အဖြစ် PFC-BLA လမ်းကြောင်းအတွက် Synaptic plasticity ၏နှောင့်အယှက်  ဤအပြန်အလှန် interaction ကလည်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှအံ့သောငှါအကြံပြုခြင်း။
သမိုင်းကြောင်းအက, NE စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်ပေမယ့်, အတော်ကြာလေ့လာမှုများကိုလည်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် DA system ကိုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။
3 ။ အဆိုပါ dopamine စနစ်က
Neurochemical လေ့လာမှုများ [သည့် DA system ကိုထိန်းသိမ်းထားစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ37] ။ [ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုဟာဖိအားဖို့ mesolimbic DA စနစ်၏တုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမြီး-ဖြစ်တော့အဖြစ်အကြိမ်ကြိမ်ဖိအား (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ထိုကဲ့သို့သောကင်းနဲ့စိတ်ကြွဆေးအဖြစ် psychostimulants ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူလွယ်ကူချောမွေ့37]) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ၏မွေးကင်းစကလေးကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါ DA စနစ် HPA ဝင်ရိုးတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိစေခြင်းငှါညွှန်း, လူကြီးများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ပုံမှန်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲ  ။ အဆိုပါ VTA ၏ DA စနစ်၏ electrophysiological ပြည်နယ်ကျယ်ကျယ် [ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး39,40]) ။ ထို့ကြောင့်, Vivo အတွက် လေ့လာမှုများ [သည့် VTA အတွက်တည်ရှိသော DA အာရုံခံ၏ထက်ဝက်မလှုပ်မရှားဖြစ်ကြပြီးကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ်မပြသ41] ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံအဆိုပါ ventral pallidum (VP) မှတစ်ဦး inhibitory GABAergic သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေတဆင့်အဆက်မပြတ် hyperpolarized, မလှုပ်မရှားပြည်နယ်မှာကျင်းပကြသည်။ အမှန်စင်စစ် pallidal afferents ၏ inactivation [ကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ်ဖို့သူတို့ကိုဖွင့်, GABAergic တားစီးကနေအာရုံခံဖြန့်ချိ42] ။ ကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ်နေကြသည်သောသူတို့၏, ပုံစံနှစ်မျိုးကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များအားဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် DA အာရုံခံ [တစ်ခုမမှန်, Single-ဆူးပစ်ခတ်ပုံစံ (သို့မဟုတ် 'လုပ်သူများ' 'လှုပ်ရှားမှု) အဖြစ်တစ်ပုံစံပစ်ခတ်ပေါကျကှဲ (သို့မဟုတ်' phasic '' လှုပ်ရှားမှု) ကိုပြသ43,44] ။ အဆိုပါ phasic ပုံစံ [glutamatergic afferent input ကိုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်44အဆိုပါ pedunculopontine tegmentum (PPTg) မှပေါ်ထွက်လာသော] အထူးသဖြင့်သူများ  ။ Phasic ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ modulates သော DA စနစ်၏ behaviourally အဓိကထွက်ရှိဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ ), နှင့် burst အတွက် phasic ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦး conditional နှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးမူလတန်းဆုလာဘ်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်ခြင်း, [သတိမျောက်ဝံများအတွက်ခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြခဲ့ကြ46] နှင့်ကြွက်များ  ။ အလိုအလျောက်မော်တာအပြုအမူပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အာရုံခံဖြစ်သော်လည်းအပြောင်းအလဲနဲ့ anaesthetized တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်မလန်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှုမှဥတုကွဲနေသည်ကြောင်အတွက်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းပြထားတဲ့အတိုင်း Non-တည်ရှိ  ပြင်းစွာတိုက်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်လုပ်သူများဥတုနှင့်၎င်းတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတိရိစ္ဆာန်များပြုမူအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ကြသည် [49,50] ။ ဒါဟာ [anaesthetized ကြွက်ထဲမှာပြင်းစွာတိုက်ရိနာစွဲဟာသာလွန် colliculus ၏ disinhibition ပြီးနောက်အမြင်အာရုံနှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန်လေ့လာတွေ့ရှိထားပြီးကြောင်းမှတ်သားရပါမည်51] ။ ထိုမှတပါး, နိုးပြုမူနေတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အလိုအလျောက်ပြီးတော့ Activision နေတာ [တဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ Activision နေတာကဲ့သို့တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိ49] ။ ထိုကဲ့သို့သော VTA သို့ထိုးသွင်း NMDA ရန်အဖြစ်ကွဲပစ်ခတ်ရန်ပိတ်ဆို့ကြောင်းထို့အပြင်ခုနှစ်, မူးယစ်ဆေးဝါး,  ကိုလည်းသင်ယူတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်  ။ ထို့ကြောင့်, anaesthetized တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာခဲ့အလိုအလျောက်ပြီးတော့ Activision နေတာနိုးပြုမူနေတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ Activision နေတာနှင့်အတူပုံစံနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်အလားတူဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ pacemaker လုပ်သူများပစ်ခတ်ရန်လှုပ်ရှားမှုဆန့်ကျင်ဘက်အတွက် [တဲ့အခြေခံ DA လှုပ်ရှားမှုပြည်နယ်ဖြန့်ဖြူး42] extrasynaptic DA ပြင်းအားဆုံးဖြတ်သည်သော။ အဆိုပါ vSub ၏ activation [ကောက်ကာငင်ကာတက်ကြွစွာ DA အာရုံခံ (ဆိုလိုသည်မှာလူဦးရေလှုပ်ရှားမှု) ၏အရေအတွက်တိုး induces ပေမယ့်နှုန်းကိုပစ်ခတ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုစိမ်းဖြင့်မအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်54] ။ ဒါက [သည့် NAc နှင့် VP မှတဆင့်တစ်ဦး polysynaptic လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ပြထားပြီး55] ။ DA အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ်ပေါကျကှဲ၏ Phasic activation သာ depolarized နှင့်ကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ်ကြသည်အာရုံခံအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်; [မတူဘဲတစ် hyperpolarized DA အာရုံခံဆဲလျအဆိုပါ NMDA ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုမဂ္ဂနီဆီယမ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုထားပါတယ်နဲ့ NMDA အားဖြင့်ဆွအပေါ်သို့မီးကိုဖြတ်လို့မရပါဘူး56] ။ အကျိုးဆက်ကတော့ vSub phasically DA အာရုံခံ၏လုပ်သူများဥတု setting အားဖြင့် PPTg အားဖြင့် activated နိုင် DA အာရုံခံ၏နံပါတ်ထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် PPTg ကို 'signal ကို' 'ကိုထောက်ပံ့ပေးသဖြင့်, vSub ဒီ signal ကို၏' အမြတ် '' ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ vSub အခြေအနေတွင်-မှီခိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးညင်သာပျော့ပျောင်းအခြေအနေတွင်အတွက်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (ပြီးတော့ Activision နေတာအတွက်ပစ်ခတ်ဖို့ vSub ခြင်းဖြင့်တက်ကြွဖြစ်ဟုသတ်မှတ်ကြသည် DA အာရုံခံ၏အလယ်အလတ်အချိုးအစားခွင့်ပြု, အ PPTg သက်ဝင်စေလိမ့်မယ်ကိန်းဂဏန်း 1a).
အသစ်က tab မှာပွင့်လင်း
Dopamine (DA) အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုအဆောက်အဦများ, အ hippocampus (vSub) ၏ ventral subiculum နှင့် basolateral amygdala (BLA) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ (a) ကိုဘာသာရပ်တစ်ခုညင်သာပျော့ပျောင်းအခြေအနေတွင်အခါပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဒီဆားကစ်များအကြားတစ်ဦးကချိန်ခွင်လျှာ (လက်ဝဲ) DA အာရုံခံသာသေးငယ်တဲ့အချိုးအစားကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ်ဖို့ခွင့်ပြု; ဤအခြေအနေ၌, pedunculopontine tegmentum (PPTg) မြှင့်လုပ်ဆောင်တဲ့ behaviourally သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသေးငယ်တဲ့ dopamine signal ကိုမှုအာရုံခံသာသေးငယ်တဲ့အချိုးအစားအတွက်ပစ်ခတ်ကွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်။ (bက) စိတ်ဖိစီးအခွအေနမှာ vSub တစ် behaviourally သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထံမှပိုကြီးတဲ့ dopamine တုံ့ပြန်မှုကိုခွင့်ပြု, ကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ် DA အာရုံခံများ၏အရေအတွက်တိုးသွေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ (c) စိတ်ဖိစီးမှုဆုတ်ခွာပြီးနောက်တစ် hyperactive BLA အားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်မှဦးဆောင်သည် DA စနစ်၏တစ်ဦးတားစီးသွေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
4 ။ ဖိအားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်
စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်ချက်ဆက်စပ်အပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကြွက်ထိုကဲ့သို့သော Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းအဖြစ်တစ်ဦးဖိအားထိတွေ့လျှင်တူညီသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်မှပြန်လာသောအခါ, ဥပမာ, က [စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူပြပါလိမ့်မယ်57] ။ အဆိုပါ DA system ပေါ်တွင်တစ်ဦးဖိအားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသိသိသာသာကြောင့်ဇီဝကမ္မစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်တစ် noxious လှုံ့ဆော်မှုရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သော anaesthetized တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုအပ်မယ့် footshock အဖြစ်တစ်ခုတည်း noxious လှုံ့ဆော်မှု, [နှုန်းကိုပစ်ခတ် DA အာရုံခံဆဲလျတခုယာယီကျဆင်းခြင်းသွေးဆောင်ပြထားပြီး58-60] နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်တစ်ခုတိုးလာ [59,61] ။ ဒါဟာ [အကြာတွင် DA အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းအတွက်ယာယီကျဆင်းခြင်းဟာ VTA ၏ medial တစျပိုငျးကိုအတွက်အများစုတွင်တည်ရှိကြောင်းပြသခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်တစ်ယာယီစိတ်လှုပ်ရှားဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဘို့ကိုတည်ရှိသောကြောင်း62] ။ ဆနျ့ကငျြတဲ့ noxious လှုံ့ဆော်မှုအချိန်အစုတခုကာလ, ကြွက်ပြုမူအတွက် Post-Synaptic က်ဘ်ဆိုက်များမှာ DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးသောအခွအေနေ [ကျော်ထပ်တလဲလဲအုပ်ချုပ်ခွင့်အခါ63] DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုအတွင်းယာယီတိုးသွေးဆောင်သည်။ စူးရှသော noxious လှုံ့ဆော်မှုမတူဘဲ, ဒီတိုးကြိုတင် vSub inactivation နေဖြင့်တားဆီးနိုင်ပါသည်  ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးထိုကဲ့သို့သောစူးရှသို့မဟုတ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုသကဲ့သို့, နိုးကြွက်မှလျှောက်ထားသောအခါတွင်လည်း vSub ၏ inactivation အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ကြောင်း DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာ [လည်းမရှိ62] ။ Microdialysis လေ့လာမှုများကိုလည်း [DA ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့်အမြီး-ဖြစ်တော့အဖြစ် noxious ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက် striatum အတွက်ဖြန့်ချိကြောင်းပြသကြ64] ။ စိတ်ဖိစီးမှု [တစ်ခုတိုးလာ VTA လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းသောစူးရှစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor တုံ့ပြန်မှုကြောင့်, စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူ Cross-sensitize ပြထားပြီး65] နှင့် NAc တစ်ခုတိုးလာ DA လွှတ်ပေးရန် [တိုးမြှင့်နေသည်66] တစ်ဦး vSub-မှီခိုထုံးစံ၌  ။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် hyperdopaminergic ပြည်နယ် [ကောင်းစွာအခြေအနေတွင်မှီခိုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုလူသိများသော hippocampus ဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်21] ။ ဒါက DA system သည်တက်ကြွစွာအခြေအနေတွင်ကယ်နှုတ်သောအခါတစ်နှိုးဆွဖို့တုံ့ပြန်မှုများကိုချဲ့ထွင်ရန်အမြင့်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုပြည်နယ်သို့ထားရှိခံရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မြင့်မားသောသတိဝီရိယလိုအပ်မယ့်ခြိမ်းခြောက်မှုသို့မဟုတ်တိကျတဲ့အခွအေနေပစ္စုပ္ပန်လျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, ထို vSub (ကပိုပြီးတုံ့ပြန်သိသိသာသာနှိုးဆွဖို့အသင့်လျော်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကယ်နှုတ် rendering, အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဆင့်မြင့်ဖို့ DA system ကိုထားမည်ကိန်းဂဏန်း 1b).
DA system ကို activation ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်တဲ့ဖိအားနောက်ပိုင်းတွင်ဖယ်ရှားအခါစနစ်တခုဆန့်ကျင်ဘက်တုံ့ပြန်မှုထားပါတယ်, တစ်ဦး homeostatic ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်ရည်ညွှန်း။ ပထမဦးဆုံးအ 1974 အတွက် R. သည်ရှောလမုန်အားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်ဤသီအိုရီအရ  စိတ်ခံစားမှုဆန့်ကျင်ဘက်၏အားလုံးအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကွောကျရှံ့သောအဖြစ်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားမှု, တွေ့ကြုံသောအခါ, ကအစွန်းရောက်စိတ်ခံစားမှုကိုရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်အခွအေနေကနေဆုတ်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်လေ့တဲ့ကာလပြီးနောက်, ထိုကဲ့သို့သောကယ်ဆယ်ရေးစခန်း (သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာ) အဖြစ်တစ်ခုဆန့်ကျင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးနှင့်တကွ, ပြိုင်ဘက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပထမဦးဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အတွေ့အကြုံအားနည်း, ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာသည်။ ကစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုဟာ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရေးမြဲတိုး induces မကြာသေးခင်လေ့လာမှုများစူးရှထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ကြောင့် 24 ဇကိုပြသကြကြောင်းအကြံပြုထားပြီးသော်လည်း, VTA အတွက် DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်  ။ ထို့ကြောင့်, စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း DA အာရုံခံ၏ကနဦး activation [တစ်ခု attenuation စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့အပြိုင်အတွက်, DA လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစိတ်ကျရောဂါအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်ကို68] ။ ဖြစ်ရပ်များ၏ထိုကဲ့သို့သော sequence ကိုတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု attenuate လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရတော့မှာပါ။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုလည်း [သည့် VTA အတွက် DA လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကျဆင်းခြင်း induces ရသောနာတာရှည်အအေးမိစိတ်ဖိစီးမှု, ပြီးနောက်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီး69] နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု mesolimbic DA အာရုံခံ၏အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ကြာရှည်အပြောင်းအလဲများကို induces ကြောင်းညွှန်ပြ။ ထို့ကြောင့်, စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်းကနဦး DA လှုပ်ရှားမှုတိုးလာဆုတ်ခွာကာလအတွင်းနောက်ဆက်တွဲစိတ်ကျရောဂါမှစနစ် predisposes ။ ဥပမာ, ဖိအားကိုကွောကျရှံ့ induces သည်မှန်လျှင်, DA လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးထွက်ပေါက်လွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့နှင့်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်သည့်ဖိအားလျှင်နှောင့်နှေးကို attenuation မူလတန်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အတွေ့အကြုံအားနည်းသွားလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီရှည်လျားဖော်ပြထားခဲ့ပြီးသော်လည်း, DA လှုပ်ရှားမှုကျဆင်းခြင်းအခြေခံသည့်အာရုံခံ circuitry သာမကြာသေးမီက elucidated ခံရဖို့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
5 ။ အဆိုပါ basolateral amygdala
အဆိုပါ BLA [စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုများထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများသို့အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့-related cortical ဒေသများချိတ်ဆက်နေဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစိတ်ခံစားမှုအဓိပ္ပာယ်ကို attribute မှထင်တဲ့ limbic ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်70] ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းအတွက် BLA ၏အရေးပါမှုကို [ယခု (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ရှင်းပါတယ်71]) ။ ထိုကဲ့သို့သော footshock သို့မဟုတ်အမြီး-ဖြစ်တော့အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုသည်, amygdala ၏ activation သွေးဆောင် [72,73] နှင့်နာတာရှည်အဖြစ်စူးရှသောဖိအား BLA အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်  ။ အဆိုပါ amygdala အတွင်းထိုမှတပါး, Synaptic plasticity  ဒါမှမဟုတ် amygdala-နျူကလိယ accumbens လမ်းကြောင်းအတွက်  လည်းကွဲပြားခြားနားသောဖိအားကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ [နာတာရှည် Morphologically,77] နှင့် [စူးရှသော78] စိတ်ဖိစီးမှုကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် BLA spiny အာရုံခံ၏ dendritic Arbore အတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုးထုတ်ယူ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးချဲ့တုန့်ပြန်အကြံပြုသည် BLA အတွက် GABAergic interneurons များ၏လှုပ်ရှားမှုလျော့နိုငျ  ။ အဆိုပါ BLA လည်း [စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ထားတဲ့ LC အာရုံခံမှသိပ်သည်း noradrenergic afferents အားလက်ခံတွေ့ဆုံ80,81] ။ ထို့အပွငျထပ်ခါတလဲလဲဖိအားနှင့်တကွ, amygdala အတွက် NE လုပ်ရပ်များ [သဘောသဘာဝတွင်ပိုမို excitatory ဖြစ်လာ29].
ထို့ကြောင့် BLA အဆိုပါ DA စနစ်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှုများအကြားအပြန်အလှန်ဖြန်ဖြေဘို့ခိုင်ခံ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် [အတွက် beta ကို-adrenergic ရန် propranolol VTA DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားကာကွယ်ပေးသည်နှင့်စိတ်ကြွဆေး locomotor တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင်ကို attenuation အောက်ပါထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုလေ့လာတွေ့ရှိ၏ပြုတ်ရည်နှင့်အတူ BLA ၏ noradrenergic မော်ဂျူဟန့်တား68] ။ BLA အာရုံခံ VTA DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများမျိုးစုံအဆောက်အဦမှပရိုဂျက်ပေးပို့ပါ။ အမှန်မှာက [သည့် VP မှသော BLA စီမံကိန်းများကိုပြသထားသည်82] နှင့် rostromedial tegmental နျူကလိယ  ။ ထို့ကြောင့် amygdala တစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက်ကိုမှတဆင့် VTA လှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ အဆိုပါ VP ဟာ midbrain ဆုလာဘ် circuitry ဖို့ forebrain ချိတ်ဆက်ကျောင်းအုပ်ကြီး output ကိုနျူကလိယသည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ [နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှု (CMS) ပြီးနောက် DA လှုပ်ရှားမှုအပေါ် BLA ခြယ်လှယ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ VP ၏ inactivation အားဖြင့်နှိမ်နင်းနိုင်ကြောင်းပြသကြ84] စိတ်ဖိစီးမှုဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း DA လှုပ်ရှားမှု၏ကျဆင်းခြင်းဟာ amygdala-pallidal လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြု။ ထို့ကြောင့်, စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ဖိစီးမှုကနေဆုတ်ခွာနေစဉ်သော်လည်းကောင်း, BLA ၏ hyperactivity (နောက်ဆက်တွဲ behaviourally သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုလျော့ကျလာသည် VP ကနေတဆင့် DA အာရုံခံတားစီးမယ်လို့ကိန်းဂဏန်း 1c).
ထို့ကြောင့် ventral hippocampus နှင့် BLA ညီမျှကွိုးစားအားထု, ဒါပေမယ့် VTA DA အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်ပေါ်နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက် modulatory ဆိုးကျိုးများ။ အဆိုပါ DA စနစ်ကအစွမ်းထက်ကွဲပြား Contextual, စိတ်ခံစားမှုများနှင့် behaviourally အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပေါင်းစည်းမှုနေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်လျက်, DA အာရုံခံ၏ output ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိသောထိုစနစ်များကို (အထူးသဖြင့် NAc) ကိုတစ်ဦးဝေဖန်တုံ့ပြန်ချက်ပေးစွမ်းသည်။ နေသည် စိတ်ဝင်စားစရာက [သည့် infralimbic prefrontal cortex ဟာ VTA အတွက် DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ်ဦး bidirectional ထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်ကြောင်းမကြာသေးမီကပြသထားသည်85] သ BLA နှင့် ventral hippocampus ကနေတဆင့်, DA လှုပ်ရှားမှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ် cortical စည်းမျဉ်းအကြံပြုခြင်း။ ထို့ကြောင့်ဤတိုက်နယ်အတွင်းချိန်ခွင်လျှာ (၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တစ်ခုသက်ရှိဖွကိန်းဂဏန်း 1) နှင့်, အပြန်အလှန်, ဒီချိန်ခွင်ပြတ်တောက် maladaptive တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
6 ။ ရောဂါဗေဒစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်
အစောပိုင်းကပြန်လည်သုံးသပ်အမျှဖိအားဟာ amygdala တို့ကမောင်းနှင်သည့် DA စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုထဲမှာကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူတစ်ဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့် ventral hippocampal ဆားကစ်ကကမကထပြုခဲ့သည့် DA စနစ်၏တစ်ဦးစူးရှ activation, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒီသာမန်လူတန်းစားစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုရွေ့လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကရောဂါဗေဒအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အမှန်မှာနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ deleterious အကျိုးဆက်များအများအပြားစိတ်ရောဂါအခြေအနေများအခြေခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
Anhedonia, ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်အားကြိုးဖြစ်ရပ်များမှအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အပျြောအပါးဆုံးရှုံးမှု, MDD အပါအဝင်အများအပြားအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်၏အဓိကလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါသမိုင်းကြောင်းလက္ခဏာမူးယစ်ဆေးလုပ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံပြီး serotonin နဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ပေမယ့်အခြေခံသိပ္ပံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် DA စနစ်ပြတ်တောက်ဖို့ anhedonia တသမတ်တည်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ  ။ အမှန်စင်စစ်ကြွက်ထဲမှာ, DA စနစ်၏တွေ့ရှိရပါသည်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်အပြုအမူများ၏ချွတ်ယွင်းမှု  နှင့် dopamine D2 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူ DA ပိတ်ဆို့ conditional ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့ disrupts  နှစ် ဦး စလုံး anhedonic ကဲ့သို့ပြည်နယ်များမှ ဦး ဆောင်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသည့်လူနာများတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအရ DA စနစ် nigrostriatal ဆုံးရှုံးမှုအပြင် mesolimbic DA စနစ်၏ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာခြင်းလည်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။89] anhedonia ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်  ။ ထို့အပြင်ပါကင်ဆန်ရောဂါ DA receptor agonists နှင့် pramipexole သို့မဟုတ် l-DOPA တို့ဖြင့်ကုသမှုသည် anhedonia လက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။87] ။ ဒီပုံစံဟာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီး anhedonia ဟာပါကင်ဆန်ရောဂါကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။87] ။ အဆိုပါ DA system ကို [ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းနှင့်ဆက်စပ်သည်9] နှငျ့လှုံ့ဆျောမှု  နှင့် DA တစ်ဦးလိုမက်လုံးပေး [သို့အကျိုးကို၏အမြင်ပြောင်းလဲ, စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုဖို့မက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့လိုအပ်သောကြောင်းတွေးဆနေပါတယ်10] ။ ဒါက [MDD ရောဂါတစ်ဦးချင်းစီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပျြောမှေ့စအတွေ့အကြုံများကိုထွက်ရှာသည့်လှုံ့ဆော်မှုများပြတ်တောက်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်92].
အဆိုပါ 1980s ပေါလု Willner နှင့် Co-လုပ်သားများအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးခန့်မှန်းရခက်သည် CMS မော်ဒယ် , [လူ့စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုအတည်ပြုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်94] ။ ဒါကမော်ဒယ် (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ [ကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းနှင့် anhedonia inducing, အချိန်တစ်စဉ်ဆက်မပြတ်ကာလအတွင်းကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်ပျော့ဖိအားတစ်ခုအကွာအဝေးမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုပါဝင်ပါသည်95]) ။ CMS သို့ထိတွေ့ကြွက်များတွင် VTA DA အာရုံခံ၏ activation [ဤစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ phenotype နှင့်အတူကြွက်ကယ်နှုတ်နိုင်ပါတယ်96] ကြွက်များတွင် anhedonia တစ်အသိအမှတ်ပြုညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည့် sucrose preference ကိုကအကဲဖြတ်အထူးသဖြင့်အဖြစ်  ။ ထိုမှတပါး, VTA DA အာရုံခံ၏တားစီး acute [မျိုးစုံစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်96] ။ တူညီသောပုံစံကိုသုံးပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်း [CMS သို့ထိတွေ့ကြွက်အဆိုပါအပြုအမူစိတ်ပျက်လက်ပျက်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် immobility တစ်ခုတိုးခြင်း, DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းဖော်ပြရန်ကြောင်းပြသထားပါတယ်84] ။ ဤသည်ကျဆင်းခြင်းဟာ BLA ဒါမှမဟုတ် VP ဖြစ်စေ inactivating ဖွငျ့ပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် non-အလေးပေးကြွက်များတွင် BLA ၏ activation [CMS သို့ကြွက်များ-တစ်ဦးလည်း VP ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ကြောင်းပြည်နယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ထားပြီးအရာကိုအလားတူ DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှု, လျော့နည်းစေ84] ။ ဤသည်စိတ်ကျရောဂါအတွက်, DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားသည့် BLA-VP လမ်းကြောင်းကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာ VP အာရုံခံအဆိုပါ BLA ထံမှ mono- နှင့် polysynaptic စီမံချက်များလက်ခံရရှိကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်  ထို့ကြောင့် DA အာရုံခံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုက်ရိုက်ဖြစ်သို့မဟုတ်ကြားခံ glutamatergic ဒေသများပါဝင်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါ BLA အဆိုပါ infralimbic PFC (ilPFC) မှသိပ်သည်းစီမံချက်များလက်ခံ၏။ အဆိုပါ ilPFC [Brodmann ဧရိယာ (BA) 25 စူးရှသောဝမ်းနည်းမှုတို့ကလူသားတွေအတွက် activated ခံရဖို့လူသိများသောဒေသများ၏ကြွက် homologue ဖြစ်ပါသည်99] နှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် hyperactive ဖြစ်ပါတယ်  ။ အမှန်စင်စစ်လူသားအတွက် MDD ကုသထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းကုထုံးကြားဝင် [BA25 အတွက်လှုပ်ရှားမှု restore100] ။ ကျနော်တို့ [CMS သို့ကြွက်များ, အ DA စနစ်၏ disinhibition အတွက် ilPFC ရလဒ်များ pharmacological inactivation အတွက် Non-အလေးပေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအဆင့်အထိ VTA DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့101] ။ ဒါဟာယခုယေဘုယျအားဖြင့် [MDD ကို select လုပ်ပါ cortical, subcortical နှင့် limbic အဆောက်အဦများချိတ်ဆက်ပေါင်းစည်းလမ်းကြောင်းထိခိုက်တဲ့စနစ်-Level ရောဂါကြောင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေသည်102,103] ။ ထို့ကြောင့် ilPFC / BA25 ၏ hyperactivity လူသားများအတွက် MDD အတွက် hyperactive ဖြစ်ပြ  နှင့် CMS ကြွက်အတွက်, (ထို BLA-VP လမ်းကြောင်းကနေတဆင့် VTA DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု၏တားစီး inducing ဖြစ်ပါတယ်ကိန်းဂဏန်း 2).
အဆိုပါ dopamine စနစ်၏ Afferent စည်းမျဉ်း။ (a) ပုံမှန်အခြေအနေအဆိုပါ ilPFC → BLA → VP အကြားချိန်ခွင်လျှာနှင့် vSub → NAc → VP circuit ကိုကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ်နေ DA အာရုံခံ၏ထက်ဝက်ခန့်မှဦးဆောင်၌။ (bအဓိကစိတ်ကျရောဂါမမှန်အတွက် ilPFC ၏) Hyperactivity (MDD) ကရလဒ်၏ကြီးမားသော, unopposed ကျဆင်းခြင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူနှစ်ခုဆားကစ်များအကြားတစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, ventral tegmental ဧရိယာပေါ်တွင် VP ၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြှင့်ခြင်း, BLA ၏ activation မှဦးဆောင် anhedonia အခြေခံမှအဆိုပြုထားသော DA လူဦးရေလှုပ်ရှားမှု။
ထိုကွောငျ့, ကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ် DA အာရုံခံဆဲလျ Response attenuate နှစ်ခုသီးခြားဆားကစ်များအကြားချိန်ခွင်လည်းမရှိ: အ ilPFC → BLA → VP [သည့် DA system ကိုတားစီး84,101], အ vSub → NAc → VP ဟာ DA system ကိုသက်ဝင်စေသော်လည်း [54,55] ။ ဒါဟာ [စိတ်ဖိစီးမှုဟာ vSub မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းစူးရှသော (footshocks) နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် / အထပ်ထပ် (ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း) ကိုပြသထားပြီး24,25,62] DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုး induces ရာ  ။ အဆိုပါ DA system ပေါ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုကို၏အကျိုးဆက်ထို့ကြောင့်၎င်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်သဘောသဘာဝနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ [105,106] ။ အဆိုပါ CMS သို့ [အမြဲအပြုအမူ depressive- နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောမှဦးဆောင်သည့်ခန့်မှန်းရခက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်107], ဒါပေမယ့်အချိန်တစ်ကြာရှည်ကာလအတွင်းထိုကဲ့သို့အကြိမ်ကြိမ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ် CMS သို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြစ်နိုင်သည် NE ကနေတဆင့်, hippocampal activation မှဦးဆောင်  အလှည့်အတွက် DA အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသော။ ထိုမှတပါး, တိရိစ္ဆာန်များ [ယခင်ကတူပြင်းထန်သောခန့်မှန်းရခက်သူတွေနဲ့အတူတွဲတည်းမှကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုပ်ခြင်းနှင့်အတူတွဲနေတဲ့အခြေအနေတွင်အဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုပြသ108] ။ လူသားများတွင်တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းစိတ်ကျရောဂါအထောက်အကူပြုဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်, မေးခှနျးထုတျစိတ်ဖိစီးမှုသင်ယူအကူအညီမဲ့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်လူသိများနှင့်အမူအကျင့်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုကောင်းမွန်စွာထူထောင်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးမထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့တိရစ္ဆာန်များ၏ထက်ဝက်အကူအညီမဲ့သင်ယူ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးနောက်ဆက်တွဲဖိအားမှလွတ်မြောက်ရန် propensity လျော့နည်းသွား)  ။ သင်ယူအကူအညီမဲ့သရုပ်ပြမထားတဲ့အခြားတစ်ဝက်, ထို့ကြောင့်မေးခှနျးထုတျစိတ်ဖိစီးမှုများထိခိုက်သက်ရောက်မှုမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးကြောင်းအခြားအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ခံကြပေမည်။ ဒါဟာ [Non-အကူအညီမဲ့တိရိစ္ဆာန်များလှုပ်ခြင်း၏တူညီသောအရေအတွက်အားလက်ခံရရှိသည့်ကြားမှ DA လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ကြသော်လည်းအကူအညီမဲ့ပြကြောင်းကြွက်, အ medial ဒေသများတွင်အထူးသဖြင့်, VTA DA လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကျဆင်းခြင်းရှိသည်မကြာသေးမီကပြသထားသည်110] ။ ဒါက [နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုရွေးချယ်သည့် VTA ၏ medial နှင့်ဗဟိုအပုဒ်အတွက် DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုလျော့ကျကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်111] ။ ထိုမှတပါး, တိရိစ္ဆာန်များ [ဒီ model အတွက် mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ပြောင်းလဲ dopamine လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ကိုက်ညီသည့် caudate နျူကလိယနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အကူအညီမဲ့အပြုအမူပြပွဲ dopamine တွေပျက်စီးမှု, ပြ112] ။ DA-မှီခိုသောသင်ယူအကူအညီမဲ့မော်ဒယ်, အ vSub-NAc လမ်းကြောင်းအတွက် Synaptic plasticity ၏နှောင့်အယှက်, [အတွက်113,114] ကကြိုတင်ခန့်မှန်းဖိအားနှင့်အတူ activated ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းခန့်မှန်းရခက်ဖိအားနှင့်တကွ, vSub → NAc → VP circuit ကို, attenuation ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထိုမှတပါး, ketamine တစ်ခု NMDA ရန်နှင့်ဝတ္ထုအစာရှောင်ခြင်း-သရုပ်ဆောင်လက္ခဏာ , [DA စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျှော့ချရေး reverse နှင့် vSub-NAc လမ်းကြောင်းအတွက် LTP restore ပြထားပြီး110] ပါမယ်အဆိုပါ hippocampus အတွက် Synaptic ပရိုတိန်း၏လျင်မြန်သော induction မှတဆင့်  နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကျဆင်းခြင်းစကြရအောင် .
သိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (စွဲလမ်းတ္ထုများအလွဲသုံးစားစူးရှသို့မဟုတ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားတည်ရှိကြောင်းသိသိသာသာအထောက်အထား [ရှိပါတယ်4,118]) ။ HPA ဝင်ရိုး function ကိုရေရှည်တည်တံ့တိုး [ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ် psychostimulants ၏နာတာရှည်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအစီရင်ခံထားသည်119], အ mesolimbic DA system ကိုသက်ဝင်စေရာ။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးတိုး mesolimbic DA အဖြစ် psychostimulants ၏အမှန်စင်စစ်စူးရှသောအုပ်ချုပ်မှု , ဒါပေမယ့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုနှင့်စူးရှဆုတ်ခွာ Basal DA အဆင့်ဆင့်အတွက်လျော့နည်းစေရန်ဦးဆောင်သည့် mesolimbic DA လမ်းကြောင်း downregulates  ။ လူသားမြားသညျတှငျ, ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ [သည့် ventral striatum အတွက် DA ဂီယာတစ်ခုလျှော့ချရေးနှင့်စူးရှခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာစဉ်ကနာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်တိုကျရိုကျ cortex ရှိကွောငျးတငျပွခဲ့ကွ122] နှင့် VTA နှင့် NAc အတွက် Synaptic plasticity ၏ပြတ်တောက် [စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးပြသထားပါတယ်123,124] ။ psychostimulants ၏ acute အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်း [ပလာစမာ ACTH နှင့် corticosterone အတွက်တိုးမြှင့်မှုအရာဖြစ်သည့် HPA ဝင်ရိုးအဖြစ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ, မြှင့်လုပ်ဆောင်125] ။ Irritable, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ psychostimulants ထံမှအစောပိုင်း abstinence စဉ်အတွင်းဘုံများမှာ  ။ ဒါဟာအနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ် (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ [နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုအပြီးဖော်ပြထားနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့် DA စနစ်များအတွက်ပြတ်တောက်မှုနဲ့အပြိုင်ထားပြီး127]) ။ လှုံ့ဆျောမှု၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီအရ  တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အပြုသဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကနဦးစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကြာချိန်အတွက်သဘာဝဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်ပိုရှည်သောအလယ်တန်းအစားထိုး anhedonic ဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်, နာတာရှည်အသုံးပြုမှုပြီးနောက်, အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ် [ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (ကအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်ထဲမှာစွဲတစ်ဦးချင်းစီမှထွက်ခွာ, ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းနိုင်129]), ပင်အချိန်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကာလပြီးနောက် relapse များ၏အန္တရာယ်တိုးပွားလာ။ ဤသည်အနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ်သာနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်, အနည်းငယ်လေ့လာမှုများစူးရှသောမူးယစ်ဆေးထိုးအောက်ပါဆုတ်ခွာ-အနုတ်လက္ခဏာအဆင့်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မကြာသေးမီက [စိတ်ကြွဆေး၏စူးရှသောဆေးထိုး 18 ဇမှတက်ဘို့တည်တံ့ဒီကျဆင်းခြင်းနှင့်တကွ, ဆေးထိုးပြီးနောက် DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှု 72 ဇ၏နောက်ဆက်တွဲကျဆင်းခြင်း induces ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်130] ။ ထိုမှတပါး, ketamine အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ် BLA inactivation ဖြစ်စေ [DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွား restores130], အ ilPFC → BLA → VP ဆားကစ်အတွက် hyperactivity အကြံပြုခြင်း, MDD မော်ဒယ်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဖြစ်ပင်တစ် psychostimulant တစ်ခုစူးရှသောဆေးထိုးပြီးနောက် relapse ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသောအနုတ်လက္ခဏာဆုတ်ခွာပြည်နယ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်များ၏ကြာချိန် DA system ကို activation များ၏ကြာချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ ဤအရလဒ်များကိုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု relapse တစ်ကြာရှည်အန္တရာယ်သွေးဆောင်သင့်ကြောင်းအကြံပြုအမှန်စင်စစ်, ဖြစ်ကောင်းကြောင့်ဆုတ်ခွာအောက်ပါ DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာလျော့နည်းသွားဖို့လည်း DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွား induces ပေးသောစူးရှသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, သော်လည်းတစ်ဦးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, တိုတောင်းဆုတ်ခွာပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပိုဆောင်းဆေးများယူနိုင်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါး-နုံတစ်ဦးချင်းစီကိုမောင်းပါလိမ့်မယ်။
ပိုကောင်းတဲ့မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်သွေးဆောင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး relapse နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူများ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုငျပုံကိုနားလည်ရန်က DA စနစ်, စိတ်ဖိစီးမှု-BLA လမ်းကြောင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပြောင်းလဲပစ်မတူညီသောဆားကစ်အတွက် pathophysiological ပြတ်တောက်နားလည်ရန်ထို့ကြောင့်အလွန်အရေးပါသည် -vSub system ကို circuit ကို။
7 ။ ကောက်ချက်
အဆိုပါ DA စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်။ အမှန်မှာထို ventral hippocampus အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် hyperactivity VTA DA အာရုံခံတစ် disinhibition မှဦးဆောင်သည် VP တစ် vSub → NAc တားစီးကနေတဆင့် VTA DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုဆုတ်ခွာအောက်ပါတို့သည် VP တစ်ခု ilPFC-BLA စိတ်လှုပ်ရှားနေတဆင့် DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုထဲမှာကြာရှည်အစားထိုးကျဆင်းခြင်း DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုကို attenuation မှဦးဆောင်လျက်ရှိ၏။ အဆိုပါ DA စနစ်ကစိတ်ရောဂါမမှန်အတော်များများ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းနိုင်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်သည်, ရောဂါဗေဒအဆိုပါ DA အာရုံခံ dysregulating သော afferent အဆောက်အဦများအတွက်အစပြုဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤဒေသများတွင်ပုံမှန်ထက် function ကို restore ပြန်ပေါ်နေတဲ့ကုထုံးအာရုံကိုတိုက်ရိုက် DA စနစ်ကကြိုးကိုင်ထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ဤလုပ်ငန်းကို NARSAD-အဆိုပါဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (PB) နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ငွေ nos ကနေလူငယ်သုတေသနဆုကိုကထောက်ခံခဲ့သည်။ MH057440, MH101180 နှင့် DA036328 (AAG)
ဒေါက်တာ Belujon အဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်အကျိုးစီးပွားသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ဒေါက်တာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းဂျွန်ဆင်နှင့်ဂျွန်ဆင်, Lundbeck, Pfizer, GSK, Puretech Ventures, Merck, Takeda, Dainippon ဆူမီတိုမို, Otsuka, Lilly, Roche နှင့် Asubio ထံမှရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 13, 2014 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2015 ။
© 2015 အဆိုပါစာရေးဆရာ (s) ကိုတော်ဝင် Society ကထုတ်ဝေသည်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
Pacak K သည်,
Palkovits M က
။ စိတ်ဖိစီးမှု-related မမှန်များအတွက်ဂယက်: ဗဟို neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု၏ 2001 ဖိအားသတ်မှတ်ချက်။ Endocr ။ ဗျာ 22, 502-548 ။ (Doi: 10.1210 / edrv.22.4.0436)
Akil H ကို,
Watson ဟာ SJ
။ စူးရှသောကဖိစီးမှုကအောက်ပါကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇထုတ်ဖော် 1995 စံနမူနာနှင့်အချိန်သင်တန်း။ neuroscience 64, 477-505 ။ (doi:10.1016/0306-4522(94)00355-9)
။ 2009 စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏ချို့ယွင်း။ နတ်။ ဗျာ Endocrinol ။ 5, 374-381 ။ (Doi: 10.1038 / nrendo.2009.106)
Belujon P ကို,
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို
။ 2011 Hippocampus, amygdala နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု: စွဲဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ထိခိုက်စေသည်ဟုအပြန်အလှန်စနစ်များကို။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1216, 114-121 ။ (Doi: 10.1111 / j.1749-6632.2010.05896.x)
Hammen ကို C
။ 2005 စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း။ Annu ။ ဗျာ Clin ။ Psychol ။ 1, 293-319 ။ (Doi: 10.1146 / annurev.clinpsy.1.102803.143938)
Lodge DJ သမား,
။ 2011 Developmental ရောဂါဗေဒ, dopamine, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် schizophrenia ။ int ။ ဂျေ Dev မှ။ neuroscience ။ 29, 207-213 ။ (Doi: 10.1016 / j.ijdevneu.2010.08.002)
။ serotonergic အာရုံခံ၏ 2002 Functional များအနက်အချို့သာလျှင်: အ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ ဂျေ Neuroendocrinol ။ 14, 911-923 ။ (Doi: 10.1046 / j.1365-2826.2002.00861.x)
။ 1989 ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 40, 191-225 ။ (Doi: 10.1146 / annurev.ps.40.020189.001203)
Schultz W က
။ 1997 Dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ယန္တရားများအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 7, 191-197 ။ (doi:10.1016/S0959-4388(97)80007-4)
။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: 1998 ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 28, 309-369 ။ (doi:10.1016/S0165-0173(98)00019-8)
။ နျူကလိယ၏ 1997 အပြုအမူလုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens: အ anhedonia အယူအဆနှင့်အတူပင်ကိုယ်မူလနှင့်အယူအဆရေးရာပြဿနာများကို။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 21, 341-359 ။ (doi:10.1016/S0149-7634(96)00017-6)
Makino S က,
Smith ကနေ MA,
။ ထပ်ခါတလဲလဲရွေ့စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း locus coeruleus အတွက် tyrosine hydroxylase ဗီဇစကားရပ်အပေါ် glucocorticoids နှင့် glucocorticoid အဲဒီ receptor mRNA အဆင့်ဆင့်၏ 2002 စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res ။ 943, 216-223 ။ (doi:10.1016/S0006-8993(02)02647-1)
Chang က MS,
။ 2000 footshock စိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါတစ်ဦးချင်းစီ locus coeruleus အာရုံခံအတွက် tyrosine hydroxylase ဗီဇ၏ကူးယူတိုးမြှင့်။ neuroscience 101, 131-139 ။ (doi:10.1016/S0306-4522(00)00352-3)
Kollack-Walker က S နဲ့,
Watson ဟာ SJ,
Akil H ကို
။ ဟမ်းစတားအတွက် 1997 လူမှုစိတ်ဖိစီးမှု: ရှုံးနိမ့်ဦးနှောက်အတွင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ် neurocircuits မြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဂျေ neuroscience ။ 17, 8842-8855 ။
။ အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု 1989 Differential အကျိုးသက်ရောက်မှု Vivo အတွက် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်, နျူကလိယ accumbens နှင့်တိုကျရိုကျ cortex medial ။ ဂျေ Neurochem ။ 52, 1655-1658 ။ (Doi: 10.1111 / j.1471-4159.1989.tb09224.x)
Korf J ကို,
Roth RH အ
။ အဆိုပါ locus coeruleus ၏အခန်းကဏ္ဍ: 1973 စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်းကြွက်နှောက် cortex အတွက် norepinephrine ၏လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်။ Neuropharmacology 12, 933-938 ။ (doi:10.1016/0028-3908(73)90024-5)
။ စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုအတွက် locus coeruleus ၏ 1999 Excitatory သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဂျေ Neuroendocrinol ။ 11, 361-369 ။ (Doi: 10.1046 / j.1365-2826.1999.00337.x)
။ 1990 Corticotropin-releasing အချက်ကွောကျမကျတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် locus coeruleus သို့ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါအမူအကျင့်ကိုသက်ဝင်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 10, 176-183 ။
။ စိတ်ဖိစီးမှု 1997 Neurocircuitry: အ hypothalamo-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏အလယ်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 20, 78-84 ။ (doi:10.1016/S0166-2236(96)10069-2)
Oleskevich S က,
Descarries L ကို,
။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏ hippocampus အတွက် noradrenaline innervation ၏ 1989 Quantified ဖြန့်ဖြူး။ ဂျေ neuroscience ။ 9, 3803-3815 ။
။ 1995 အဆိုပါ hippocampus တကယ်အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း? ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 71, 1-10 ။ (doi:10.1016/0166-4328(95)00034-8)
။ ငြိမ်းအေးကြောက်စိတ် reinstatement အခြေအနေများ Contextual လှုံ့ဆော်မှု၏ 1979 အခန်းက္ပ။ ဂျေ Exp ။ Psychol ။ Animation ။ ပြုမူနေ။ ဖြစ်စဉ်ကို။ 5, 368-378 ။ (Doi: 10.1037 / 0097-7403.5.4.368)
Tauchi M က,
။ အဆိုပါ hypothalamo-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏အလယ်ပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှု circuitry အရေးကြီးတဲ့၏ differential ကို activation: စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အသားစားစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် 2003 စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှု။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 144, 5249-5258 ။ (Doi: 10.1210 / en.2003-0713)
။ 2013 Activation နှင့် norepinephrine နှင့် locus coeruleus ဆွအားဖြင့် hippocampal ventral subiculum အတွက်အာရုံခံ၏တားစီး။ Neuropsychopharmacology 38, 285-292 ။ (Doi: 10.1038 / npp.2012.157)
။ ventral subiculum အာရုံခံအတွက် 2013 Footshock-သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှု locus coeruleus noradrenergic afferents ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 23, 1320-1328 ။ (Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2012.10.007)
။ စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှုအတွက် ventral subiculum ၏ 2006 အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 174, 215-224 ။ (Doi: 10.1016 / j.bbr.2006.05.035)
Sitcoske M က,
Maren S က
။ 1998 ချက်ချင်း-အစောပိုင်း footshock စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဆက်စပ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အောက်ပါ amygdala အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်။ ဦးနှောက် Res ။ 796, 132-142 ။ (doi:10.1016/S0006-8993(98)00294-7)
Galvez R ကို,
။ ဆွ footshock တုံ့ပြန်အတွက် amygdala အတွက် 1996 Norepinephrine လွှတ်ပေးရန်။ Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 66, 253-257 ။ (Doi: 10.1006 / nlme.1996.0067)
။ basolateral amygdala အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု 2007 Noradrenergic မော်ဂျူ: alpha-2 နှင့် beta ကိုအဲဒီ receptor activation ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန့်ကျင်။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 12 358-12 366 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2007-07.2007)
Lakshminarasimhan H ကို,
Chattarji S က
။ 2012 စိတ်ဖိစီးမှုဟာ hippocampus နှင့် amygdala အတွက် neurotrophic အချက်ဆင်းသက်လာဦးနှောက်၏အဆင့်ဆင့်အပေါ်ခြားနားသက်ရောက်မှုစေပါတယ်။ PLoS ONE 7, e30481 ။ (Doi: 10.1371 / journal.pone.0030481)
R ကို Yuste,
Bonhoeffer T က
။ 2001 Morphological ရေရှည် Synaptic plasticity နှင့်ဆက်စပ် dendritic ကျောရိုးထဲမှာပြောင်းလဲစေပါသည်။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 24, 1071-1089 ။ (Doi: 10.1146 / annurev.neuro.24.1.1071)
လှိုဏ် H ကို,
က de Kloet ER,
Joel M က
။ mouse ကို amygdalar Synaptic plasticity ၏ 2012 စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးမြှင့် glucocorticoid နှင့် SS-adrenergic လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ PLoS ONE 7, e42143 ။ (Doi: 10.1371 / journal.pone.0042143)
Glowinski J ကို
။ စိတ်ဖိစီးမှုများက mesocortical DA စနစ်၏ 1976 ရွေးချယ် activation ။ သဘာဝ 263, 242-244 ။ (Doi: 10.1038 / 263242a0)
Williams က B ကို,
။ အဆိုပါ dorsal medial prefrontal cortex ၏ 2008 Noradrenergic innervation စိတ်ခံစားမှုဖိစီးစေနိုင်ပြီး acute hypothalamo-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှု modulates ။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 5806-5816 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0552-08.2008)
Maroun M က,
။ စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုလုပ်ကွက်မှ 2003 Exposure အဆိုပါ amygdala-prefrontal cortex လမ်းကြောင်း၏ရေရှည်အလားအလာများ induction Vivo အတွက်. ဂျေ neuroscience ။ 23, 4406-4409 ။
။ 2005 အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက်အာရုံခံတစ် subpopulation တစ် dopamine D4 အဲဒီ receptor-မှီခို basolateral amygdala input ကိုကတဆင့်ပေါက်ကွဲပြီးနှင့်ကြိမ်နှုန်း codes တွေကိုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု encodes ။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 6066-6075 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1168-05.2005)
သည် Le Moal က M
။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ 1998 ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ။ 19, 67-74 ။ (doi:10.1016/S0165-6147(97)01115-2)
ဗန် Galen H ကို
။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏ 1992 မွေးကင်းစကလေးကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါ medial prefrontal cortex နဲ့လူကြီးအခြား dopamine စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုမှ monoaminergic တုံ့ပြန်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 596, 169-182 ။ (doi:10.1016/0006-8993(92)91545-P)
။ schizophrenia များ၏ etiology များအတွက်အယူအဆ: လုပ်သူများ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် dopamine system ကိုတုန့်ပြန်၏မော်ဂျူနှိုင်းယှဉ် 1991 Phasic ။ neuroscience 41, 1-24 ။ (doi:10.1016/0306-4522(91)90196-U)
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို,
goto Y ကို,
Lodge DJ သမား
။ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်၏ပစ်ခတ်ရန်၏ 2007 စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 30, 220-227 ။ (Doi: 10.1016 / j.tins.2007.03.003)
။ တစ်ခုတည်းဆူးပစ်ခတ်ရန်: nigral dopamine အာရုံခံအတွက်ပုံစံပစ်ခတ်များ၏ထိန်းချုပ်မှု 1984 ။ ဂျေ neuroscience ။ 4, 2866-2876 ။
Ash ကို B ကို,
Moore က H ကို,
။ dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်၏ 2003 Afferent မော်ဂျူ differential လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine ဂီယာထိန်းညှိ။ နတ်။ neuroscience ။ 6, 968-973 ။ (Doi: 10.1038 / nn1103)
။ 1983 Intracellular နှင့် nigral dopaminergic အာရုံခံ၏ extracellular electrophysiology ။ 1 ။ သတ်မှတ်ချက်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ neuroscience 10, 301-315 ။ (doi:10.1016/0306-4522(83)90135-5)
။ 1984 nigral dopamine အာရုံခံအတွက်ပုံစံပစ်ခတ်များ၏ထိန်းချုပ်မှု: ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်။ ဂျေ neuroscience ။ 4, 2877-2890 ။
။ 2006 အဆိုပါ laterodorsal tegmentum ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်အဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 103, 5167-5172 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.0510715103)
။ dopamine အာရုံခံ၏ 1998 ခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 80, 1-27 ။
Schmidt က R ကို,
။ 2005 Dopamine ဆဲလ်ဂန္ထဝင်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်: အကျိုးကို-သင်ယူမှုကွန်ယက်တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းဘို့သက်သေသာဓက။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 6235-6242 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1478-05.2005)
Heym J ကို,
။ အဆိုပါအိပ်ပျော်ခြင်း-နှိုးသံသရာတစ်လျှောက်တင်ဆက်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှကြောင်တစ်ကောင်အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ 1983 တုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 277, 150-154 ။ (doi:10.1016/0006-8993(83)90917-4)
hay J ကို,
Miller က R ကို
။ အဆိုပါလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားကြွက်များတွင် midbrain dopamine ဆဲလ်၏ Modes သာပစ်ခတ် 2002 ။ neuroscience 114, 475-492 ။ (doi:10.1016/S0306-4522(02)00267-1)
Chiodo LA က,
Freeman က AS
။ 1990 ထုံဆေးဟာ Basal လှုပ်ရှားမှုနဲ့ nigrostriatal dopamine အာရုံခံ၏ pharmacological တုန့်ပြန်ပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုး။ synapses 6, 207-209 ။ (Doi: 10.1002 / syn.890060213)
Coizet V ကို,
Blaha CD ကို,
Martindale J ကို,
Lefebvre V ကို,
ဝေါ်လ်တန် N ကို,
Redgrave P ကို
။ အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတိုတောင်းအောင်းနေချိန်မှာ dopaminergic အာရုံခံကိုသက်ဝင်ဘယ်လို 2005 ။ သိပ္ပံ 307, 1476-1479 ။ (Doi: 10.1126 / science.1107026)
Overton P ကို,
Clark က: D
။ အဆိုပါ N-methyl-D-aspartate အဲဒီ receptor မှာသရုပ်ဆောင် 1992 Iontophoretically အုပ်ချုပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကြွက်များတွင် A9 dopamine အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ်ကွဲ modulate ။ synapses 10, 131-140 ။ (Doi: 10.1002 / syn.890100208)
Kest K သည်,
Ranaldi R ကို
။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ 2009 NMDA အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု၏ဝယ်ယူချို့ယွင်း။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 197, 442-449 ။ (Doi: 10.1016 / j.bbr.2008.10.013)
။ 2006 အဆိုပါ hippocampus phasic အာရုံခံဆဲလျ activation များ၏ပြင်းထန်မှုကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျ Response modulates ။ Neuropsychopharmacology 31, 1356-1361 ။ (Doi: 10.1038 / sj.npp.1300963)
။ အဆိုပါ hippocampus ထံမှနျူကလိယမှ 2001 Glutamatergic afferents ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 21, 4915-4922 ။
။ Mg ခြင်းဖြင့် 1984 ဗို့အား-မှီခိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု2+ ကျောရိုးအာရုံကြောဆဲလ်ထဲမှာ NMDA တုံ့ပြန်မှု၏။ သဘာဝ 309, 261-263 ။ (Doi: 10.1038 / 309261a0)
Fanselow က MS
။ 2000 Contextual ကြောက်ရွံ့ခြင်း, gestalt အမှတ်တရများ, နှင့် hippocampus ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 110, 73-81 ။ (doi:10.1016/S0166-4328(99)00186-2)
။ nigral dopaminergic ဆဲလ် 1979 ဝိရောဓိဂါဘမြို့သားစိတ်လှုပ်ရှား: reticulata inhibitory အာရုံခံမှတဆင့်သွယ်ဝိုက်ဖျန်ဖြေခြင်း။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 59, 211-218 ။ (doi:10.1016/0014-2999(79)90283-8)
Schultz W က,
Romo R ကို
။ အဆိုပါထုံဆေးမျောက်အတွက်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု somatosensory ဆွဖို့ nigrostriatal dopamine အာရုံခံ၏ 1987 တုံ့ပြန်ချက်။ ဂျေ Neurophysiol ။ 57, 201-217 ။
။ ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ၏ Uniform တားစီး 2004 ။ သိပ္ပံ 303, 2040-2042 ။ (Doi: 10.1126 / science.1093360)
Brischoux က F,
Chakraboty, S ကို,
။ noxious လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral VTA အတွက် dopamine အာရုံခံ၏ 2009 Phasic စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 106, 4894-4899 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.0811507106)
။ 2011 ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ ventral hippocampus တစ်ဘုံအရေးယူမှုကနေတဆင့် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 4280-4289 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5310-10.2011)
Saulskaya N ကို,
။ N-methyl-D-aspartate receptors အပေါ်သို့မှီခို: 1995 dopamine လွှတ်ပေးရန်အေးစက်။ neuroscience 67, 57-63 ။ (doi:10.1016/0306-4522(95)00007-6)
Kharouby M က,
သည် Le Moal က M,
ကားရှိမုနျ H ကို
။ 1993 အဆင့်မြင့်နှင့်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ predisposed တိရိစ္ဆာန်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ပြင်းအားအတွက်ပိုရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုး: တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 602, 169-174 ။ (doi:10.1016/0006-8993(93)90260-T)
။ mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ hippocampal drive ကို၏ 2008 ဖက်တမင်းဆေးပြားကို Activation: အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးယန္တရား။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 7876-7882 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1582-08.2008)
Cador M က,
Bregonzio ကို C,
။ 2007 နျူကလိယအတွင်းစိတ်ကြွဆေးဖို့ persistent တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်အဖြေအချိုမှု-dopamine အပြန်အလှန် core ကို accumbens ပေမယ့်တစ်ခုတည်းထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါ Shell မဟုတ်ပါဘူး။ Neuropsychopharmacology 32, 682-692 ။ (Doi: 10.1038 / sj.npp.1301080)
။ လှုံ့ဆျောမှု၏တစ်ဦးပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ 1974 ။ အကျိုးသက်ရောက်စေ၏ဗြဲယာယီဒိုင်းနမစ်။ Psychol ။ ဗျာ 81, 119-145 ။ (Doi: 10.1037 / h0036128)
Chang က CH,
။ 2013 Amygdala beta ကို-noradrenergic receptors ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအောက်ပါ dopamine လှုပ်ရှားမှု၏နှောင့်နှေး downregulation modulate ။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 1441-1450 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2420-12.2013)
။ 2001 နာတာရှည်အအေးမိစိတ်ဖိစီးမှု ventral tegmental dopamine အာရုံခံ၏အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology 24, 410-419 ။ (doi:10.1016/S0893-133X(00)00188-3)
။ ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များဖို့ amygdala များ၏အလှူငွေ 1993 ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 16, 328-333 ။ (doi:10.1016/0166-2236(93)90110-8)
Roozendaal B က,
။ 2009 စိတ်ဖိစီးမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့် amygdala ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 10, 423-433 ။ (Doi: 10.1038 / nrn2651)
။ 1978 ထူးခြားသောနှင့်နာတာရှည် haloperidol ကုသမှု: nigral dopaminergic ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 23, 1715-1727 ။ (doi:10.1016/0024-3205(78)90471-X)
။ ဗဟို amygdala ၏အာရုံခံအပေါ် basolateral amygdala နှင့် footshock ဆွ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတိုက်အခံ 2006 ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 59, 801-811 ။ (Doi: 10.1016 / j.biopsych.2005.09.013)
။ 2009 Anxiogenic အလိုအလျောက်၏မော်ဂျူနှင့် basolateral amygdala အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု evoked ။ neuroscience 163, 1069-1077 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2009.07.003)
။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ပြုမူ၏ dentate gyrus နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ amygdala အတွက် LTP အပေါ်မေးခှနျးထုတျစိတ်ဖိစီးမှု 2004 အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 19, 1887-1894 ။ (Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2004.03294.x)
။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ rostral နှင့် caudal ငျဒသေအတွက် amygdala နှင့် hippocampal သွင်းအားစု၏ 2011 သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအပြောင်းအလဲနဲ့။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ 14, 1301-1314 ။ (Doi: 10.1017 / S1461145710001586)
Mitra R ကို,
Jadhav S က,
။ 2005 စိတ်ဖိစီးမှုကြာချိန်ဟာ basolateral amygdala အတွက်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ spatiotemporal ပုံစံများ modulates ။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 102, 9371-9376 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.0504011102)
။ 2013 ကြောက်လန့်မျိုးသုဉ်းလိုငွေပြမှုတိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် basolateral amygdala အာရုံခံအတွက် dendritic ရုပ်သိမ်းမှုစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုတွဲဖက်အောက်ပါ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 38, 2611-2620 ။ (Doi: 10.1111 / ejn.12259)
Aroniadou-Anderjaska V ကို,
Post ကို RM,
လီ H ကို
။ 2002 Lamotrigine အလိုအလျောက်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့် basolateral amygdala အတွက်ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor-mediated Synaptic ဂီယာ evoked: ဖမ်းဆီးရမိအတွက်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများများအတွက်သက်ရောက်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်။ Neuropharmacology 42, 522-529 ။ (doi:10.1016/S0028-3908(01)00198-8)
Alexinsky T က
။ ကြွက်များနှင့်မျောက်များပြုမူအတွက် noradrenergic locus coeruleus အာရုံခံ၏ 1991 discharge သတိဝီရိယတစ်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားသည်။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 88, 501-520 ။ (doi:10.1016/S0079-6123(08)63830-3)
Echevarria DJ သမား,
Garcia က AS,
ma S က,
။ စိတ်ဖိစီးမှုဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက် norepinephrine ၏ 2005 အခန်းက္ပ။ prog ။ Neuro-psychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 29, 1214-1224 ။ (Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2005.08.007)
။ amygdala ဆွနှင့် accumbens nucleus မှ dopamine စီမံကိန်းကြောင့်၎င်းတို့၏မော်ဂျူမှ ventral pallidal အာရုံခံ၏ 1983 တုံ့ပြန်မှု။ ဂျေ Neurophysiol ။ 50, 148-161 ။
။ အကျိုးကိုစနစ်၏အရေးပါသော modulator တွေကို: အဆိုပါ mesopontine rostromedial tegmental နျူကလိယ 2011 ။ Basal Ganglia 1, 191-200 ။ (Doi: 10.1016 / j.baga.2011.08.003)
။ 2013 Amygdala-ventral pallidum လမ်းကြောင်းကြွက်များတွင်နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် dopamine လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 76, 223-230 ။ (Doi: 10.1016 / j.biopsych.2013.09.020)
။ 2013 အဆိုပါ infralimbic cortex bidirectionally ကွဲပြားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကနေတဆင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု modulates ။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 16 865-16 873 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2449-13.2013)
။ 2008 Dopamine နှင့်ဆုလာဘ်: ပေါ်တွင် anhedonia အယူအဆ 30 နှစ်ပေါင်း။ Neurotox ။ res ။ 14, 169-183 ။ (Doi: 10.1007 / BF03033808)
။ dopamine ကမောက်ကမဖြစ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် Self-stimulation ချို့ယွင်းဖို့ anhedonia ပံ့ပိုးမှုများကိုနှိုင်းယှဉ် parkinsonian ၏စာမေးပွဲ 1986 ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 22, 117-125 ။ (doi:10.1016/0166-4328(86)90033-1)
Huang က AC အ,
Hsiao S က
။ 2002 Haloperidol saccharin ဖြေရှင်းချက်စားသုံးမှု၏အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိအေးစက်ဖိနှိပ်မှု attenuates: dopamine ပိတ်ဆို့ခြင်းများ anhedonia အယူအဆ၏ reevaluation ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 116, 646-650 ။ (Doi: 10.1037 / 0735-7044.116.4.646)
Javoy-Agid က F,
Agid Y ကို
။ 1980 ပါကင်ရောဂါမှာပါဝင်နေတဲ့ mesocortical dopaminergic system ကိုလား? အာရုံကြော 30, 1326-1330 ။ (Doi: 10.1212 / WNL.30.12.1326)
။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိတ်ကျရောဂါ၏ neurobiological အလွှာ: အယူအဆ။ နိုင်သလား။ ဂျေ Neurol ။ သိပ္ပံ။ 11 (1 ပျော့ပျောင်း။ ), 105-107 ။
Mingote S က,
Weber နဲ့ SM
။ သဘာဝကလှုံ့ဆျောမှု, Psychiatry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏လေ့လာမှုများအဘို့အဂယက်: 2003 နျူကလိယ dopamine နှင့်အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏စည်းမျဉ်း accumbens ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 305, 1-8 ။ (Doi: 10.1124 / jpet.102.035063)
။ anhedonia နှင့်အခြားဆုလာဘ်-related လိုငွေပြမှု၏ neurobiology 2012 ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 35, 68-77 ။ (Doi: 10.1016 / j.tins.2011.11.005)
Willner P ကို,
Sophokleous S က,
မပ်စ်ကတ် R ကို
။ နာတာရှည်ခန့်မှန်းရခက်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်လက္ခဏာအားဖြင့်ယင်း၏ပွနျလညျထူထောငျခွငျးအားဖွငျ့ sucrose preference ကို၏ 1987 လျှော့ချရေး။ Psychopharmacology 93, 358-364 ။ (Doi: 10.1007 / BF00187257)
Verma P ကို,
Weinberg J ကို
။ နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှု 2012 Neurobiology: အဓိကစိတ်ကျရောဂါမှမျဉ်းပြိုင်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 36, 2085-2117 ။ (Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2012.07.001)
Willner P ကို
။ တစ်ဦး 1997 နှစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အကဲဖြတ်: စိတ်ကျရောဂါ၏နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်၏ 10 သက်တမ်း, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့် utility ကို။ Psychopharmacology 134, 319-329 ။ (Doi: 10.1007 / s002130050456)
et al ။
2013 Dopamine အာရုံခံအာရုံကြော encoding ကများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ-related အပြုအမူ၏စကားရပ် modulate ။ သဘာဝ 493, 537-541 ။ (Doi: 10.1038 / nature11740)
။ စိတ်ကျရောဂါ၏ 1982 တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်: တစ် hedonic လိုငွေပြမှု၏ pharmacological sensitivity ကို။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 16, 965-968 ။ (doi:10.1016/0091-3057(82)90053-3)
။ dopaminergic အာရုံခံ၏ 1994 Activation amygdala ဆွခြင်းဖြင့် evoked ventral pallidal တုံ့ပြန်မှု modulates ။ neuroscience 62, 1103-1119 ။ (doi:10.1016/0306-4522(94)90347-6)
1999 အပြန်အလှန် limbic-cortical function ကိုနှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်: စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပုံမှန်ဝမ်းနည်းမှုအတွက်ပေတွေ့ရှိချက်ဆုံ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 156, 675-682 ။
Voon V ကို,
Hamani ကို C,
။ ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါများအတွက် 2005 နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ။ အာရုံခံဆဲလျ 45, 651-660 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuron.2005.02.014)
။ စိတ်ကျရောဂါများနာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်အတွက် dopaminergic စနစ်က function ကို၏ 2014 Infralimbic prefrontal cortex မော်ဂျူ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အ Society က။
Barrot M က,
။ စိတ်ကျရောဂါ၏ 2002 Neurobiology ။ အာရုံခံဆဲလျ 34, 13-25 ။ (doi:10.1016/S0896-6273(02)00653-0)
Vaidya VA သို့,
Duman သည် RS
။ 2001 Depresssion: neurobiology ကနေပေါ်ထွက်လာထိုးထွင်းသိမြင်။ br ။ Med ။ နွားလား။ 57, 61-79 ။ (Doi: 10.1093 / bmb / 57.1.61)
။ 2003 စိတ်ကျရောဂါအတွက်အလုပ်မဖြစ် limbic-cortical ဆားကစ်ပြောင်းလဲ: ရောဂါနှင့် optimized ကုသမှုများအတွက်ဦးနှောက်-based algorithms ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆီသို့ဦးတည်။ br ။ Med ။ နွားလား။ 65, 193-207 ။ (Doi: 10.1093 / bmb / 65.1.193)
Badia P ကို
။ 1984 ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်စျေးမှာ: စိတ်ဖိစီးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်နှင့်ဇီဝကမ္မအစီအမံများ၏အမူအကျင့်အစီအမံ။ Psychol ။ နွားလား။ 96, 45-71 ။ (Doi: 10.1037 / 0033-2909.96.1.45)
Anisman H ကို,
Matheson K သည်
။ 2005 စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့် anhedonia: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကိုရည်မှတ်အတွက်အသိပေးချက်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 29, 525-546 ။ (Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2005.03.007)
Mitchell က PJ
။ စိတ်ကျရောဂါမှဓာတ်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များများ၏တရားဝင်မှု 2002 ။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 13, 169-188 ။ (Doi: 10.1097 / 00008877-200205000-00001)
။ နှိုင်းယှဉ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း 1972 ။ ခန့်မှန်းရခက်စျေးမှာ: preference ကိုအပြုအမူများနှင့်အစာအိမ်အနာ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 9, 693-698 ။ (doi:10.1016/0031-9384(72)90036-4)
ဝူ J ကို
။ သင်ယူအကူအညီမဲ့၏ 1997 Serotonergic မော်ဂျူ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 821, 538-541 ။ (Doi: 10.1111 / j.1749-6632.1997.tb48324.x)
။ 2014 စိတ်ကျရောဂါအတွက်ခံစားချက်ချိန်ခွင်လျှာ Restoring: ketamine dopamine-မှီခို Synaptic plasticity အတွက်လိုငွေပြမှုနောက်ကြောင်းပြန်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 76, 927-936 ။ (Doi: 10.1016 / j.biopsych.2014.04.014)
။ စိတ်ဖိစီးမှု pre-ထိတွေ့မှုအားဖြင့်တုန့်ပြန်အပြောင်းအလဲတချို့: 2012 အမျိုးမျိုးဖိအား mesolimbic dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုစိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်တားစီးထုတ်လုပ်ရန်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 35, 1312-1321 ။ (Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2012.08038.x)
။ စိတ်ကျရောဂါများ pathophysiology အတွက် dopamine များ၏အခန်းကဏ္ဍ 2007 ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 64, 327-337 ။ (Doi: 10.1001 / archpsyc.64.3.327)
။ hippocampus-accumbens သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ 2008 ဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍ။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 9797-9805 ။ (Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2200-08.2008)
Phillips က AG က
။ နျူကလိယ၏ hippocampal နှင့် amygdalar-evoked လှုပ်ရှားမှု 2001 Modulation dopamine နေဖြင့်အာရုံခံ accumbens: input ကိုရွေးချယ်ရေး၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ ဂျေ neuroscience ။ 21, 2851-2860 ။
Zarate, CA ဂျူနီယာ,
Singh က JB,
Ameli R ကို,
။ ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်အဓိကစိတ်ကျရောဂါတစ်ခု N-methyl-D-aspartate ရန်၏ 2006 ကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေး။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 856-864 ။ (Doi: 10.1001 / archpsyc.63.8.856)
Garcia က LS,
ketamine ၏ 2008 နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး hippocampal ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲကြွက်များတွင်လက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှု elicits ။ အခြေခံပညာ Clin ။ Pharmacol ။ Toxicol ။ 103, 502-506 ။ (Doi: 10.1111 / j.1742-7843.2008.00210.x)
Li က N ကို,
Banasr M က,
Lee က B ကို,
သားတော်ကို H ကို,
။ 2011 အချိုမှု N-methyl-D-aspartate အဲဒီ receptor ရန်လျှင်မြန်စွာနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမူအကျင့်များနှင့် Synaptic လိုငွေပြမှု reverse ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 69, 754-761 ။ (Doi: 10.1016 / j.biopsych.2010.12.015)
Sinha R ကို
။ 2001 ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် relapse ၏ဖိစီးမှုကိုတိုးအန္တရာယ်သနည်း Psychopharmacology 158, 343-359 ။ (Doi: 10.1007 / s002130100917)
Borowsky B က,
။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် hypothalamo-pituitary-adrenal activation ၏ 1991 Monoamine ဖျန်ဖြေခြင်း။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 256, 204-210 ။
di Chiara, G,
2004 Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ: အနျူကလိယ shell ကိုကွန်နက်ရှင် accumbens ။ Neuropharmacology 47 (ပျော့ပျောင်း။ 1), 227-241 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2004.06.032)
တရားမျှတရေး JB ဂျူနီယာ
။ 1991 Basal extracellular dopamine နာတာရှည်ကင်းထံမှ abstinence စဉ်အတွင်းကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်လျော့နည်းသွားသည်။ synapses 9, 60-65 ။ (Doi: 10.1002 / syn.890090109)
Logan J ကို,
Hitzemann R ကို,
Pappas N ကို
။ 1997 detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝ 386, 830-833 ။ (Doi: 10.1038 / 386830a0)
Mameli M က,
Halbout B က,
Creton ကို C,
Spanagel R ကို,
Luscher ကို C
။ 2009 ကင်း-evoked Synaptic plasticity: အ VTA အတွက်ဇွဲအဆိုပါ NAc in adapter တစ်ခုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နတ်။ neuroscience ။ 12, 1036-1041 ။ (Doi: 10.1038 / nn.2367)
။ 1993 မူးယစ်ဆေးစွဲ: အာရုံကြော plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံများအတွက်မော်ဒယ်။ အာရုံခံဆဲလျ 11, 995-1006 ။ (doi:10.1016/0896-6273(93)90213-B)
။ လူ့ကင်းချိုးဖောက် plasma cortisol နှင့် prolactin အပေါ်သွေးကြောသွင်းကင်း၏ 1995 အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 38, 751-755 ။ (doi:10.1016/0006-3223(95)00083-6)
Alterman AI အ,
Kampman K သည်
။ 1999 ကင်း abstinence symptomatology နှင့်ကုသမှု attrition ။ ဂျေ Subst ။ အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံပါ။ 16, 129-135 ။ (doi:10.1016/S0740-5472(98)00017-8)
။ 2007 စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ dysregulation နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 164, 1149-1159 ။ (Doi: 10.1176 / appi.ajp.2007.05030503)
။ အပျော်အပါး၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်နာကျင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများ: ဝယ်ယူလှုံ့ဆျောမှု၏ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ 1980 ။ နံနက်။ Psychol ။ 35, 691-712 ။ (Doi: 10.1037 / 0003-066X.35.8.691)
။ 2008 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းအတွက်ပြိုင်ဘက်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအဘို့အ Neurobiological ယန္တရားများ။ ဖိ။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ B က 363, 3113-3123 ။ (Doi: 10.1098 / rstb.2008.0094)
။ စူးရှသောစိတ်ကြွဆေးဆုတ်ခွာအောက်ပါ dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအတွင်း 2014 Decrease အဆိုပါ BLA ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းနှင့် ketamine အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အ Society က။
Ed ကဘုတ်အဖွဲ့ (PDF)
ဒီ keyword ကိုရှာရန်